[VIDEO] Bekas Jenderal Dedah Kementerian Pertahanan Beli Senjata Secara Rasuah
Deep Sea Kama Sutra
Kachin Civil war threatens
[KAJIAN UMCEDEL] Sokongan PR Meningkat, BN Turun, Populariti Anwar Hampiri Najib
Sixteen Common Canine Myths
We are all ‘pendatang,’ Dr M. Mahathirapendatang
Government must stop Hate Speech nationwide and Insults on Muslims of Myanmar at grassroot level
အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ကာကွယ်ခြင်းလော.နာဇီ ဖက်ဆစ်စနစ် ထူထောင်ခြင်းလော။ (အပိုင်း-၂)
The Girl in the Tool Room *joke*
မြန်မာမင်းများ၏ လူမျိုးစုံ အမှုထမ်းများနှင့် တာဝန်ခွဲဝေခန့်ထားမှုများ
သမ္မတဦးသိန်းစိန်ထံသို့ သမ္မတရုံးဝဘ်ဆိုဒ်မှတဆင့် ယနေ့ ပေးပို့ခဲ့ပြီးသော အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
[VIDEO] Masalah Air Di Pahang Tapi Najib Sibuk Kelantan
Posted: 23 Jan 2013 09:17 AM PST
"Datuk Ghafir persoalkan kenapa kerajaan Malaysia yang kaya, tetapi kelengkapan dan kem tentera sangat daif sedangkan RM75 bilion sudah dibelanjakan ikut belanjawan," kata Rafizi.
"Amalan beli senjata rundingan terus yang ada rasuah, jejaskan persiapan tentera kita dan abaikan kebajikan tentera," kata Ghafir.
"Bila Malaysia beli senjata, tiada pemindahan teknologi. Negara lain macam Pakistan lebih miskin tetapi mereka beli termasuk teknologi," kata Ghafir dipetik.
Posted: 23 Jan 2013 05:49 AM PST
Think deep-sea squid have sex in the missionary position? Now the first video capturingapair in the act is revealing the unexpected details of cephalopod coupling in the abyss.
The clip, filmed byaNational Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) submersible in the Gulf of Mexico last year, allowed Michael Vecchione from the Smithsonian Institution and colleagues to observe for the first time howamale squid uses its penis to transfer packets of sperm. They were surprised at the sexual position the pair adopted: the male was upside down on top of the female and back to front, with his arms around her head. There areafew possible reasons for this arrangement: it could be out of comfort (for the female), or to allow the male to access the best spot for his sperm, but it's also thought to prevent the female from grabbing and perhaps eating her partner.
CLICK HERE to watch this fascinating video and to read the rest of the post by Sandrine Ceurstemont, editor, New Scientist TV.
Posted: 23 Jan 2013 05:48 AM PST
ဒိန်းမတ် သတင်းထောက်မှ ကချင်စစ်ပွဲသို့ကိုယ်တိုင်သွားေ၇ာက် သတင်းယူခဲ့ပြီး ဒိန်းမတ် ရုပ်သံ မှ တင်ဆက်
Source FB of ဝါဇီ လှမြင့်‎#နှာစေးကြသူများ#
ဘားအံ့၊ရခိုင်နဲ့အချို့မြို့တွေမှာဒီရက်ပိုင်း မျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်နေကြတဲ့ ဥာဏ်ရည်နှိမ့်ပါးသူ အချို့ရဲ့စာတွေ တွေ့ နေရတယ်။ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ်တည်ဆောက်တည့်မတ်ရမဲ့အစား တဘက်သားကို နှိမ်ချဖြိုဖျက်နိင်မှာ့ နေရာ ရမယ်လို့အတွေးတိမ်တိမ်နဲ့လုပ်ဆောင်နေကြတာ အင်မတန်မှာ့ရှက်စရာကောင်းမှန်းမသိကြရှာဘူး။
ပညာဥာဏ်မျက်စိ ရှိတဲ့ မိတ်ဆွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကတော့ တော်တော်ရှက်နေကြတယ်။ြှဗမစိုရ်တရားလေးပါးနဲ့ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့်ကျင်နေမှာ့တော့ ရှက်ရှာတော့မပေါ့။
ဘယ်မှာလည်း မေတ္တာ ဂရုဏာ မုဒိတာ ဥပေက္ခာ စာအုပ်ထဲမှာလား ….?
ထာပါလေ ဒါက ဥာဏ်ရည်နှိမ့်ပါးသူ လူနည်းစုရဲ့လုပ်ရပ်ပါ ။
ပြောချင်တာက ဒီနိင်ငံက အစိုးရ သာသနာရေး ပြည်ထဲရေးဌာနတွေ ပညာတတ်ရဟန်း တွေ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ လူအခွင့်အရေး လူသားချင်းတန်းတူညီမျှရေး တကြော်ကြော်အော်နေတဲ့နိင်ငံရေးလုပ်စားနေတဲ့နိင်ငံရေးပါတီတွေ ကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့လို စိးပွားမရှာနိင်ပဲ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့ဖို့ မပွင့်မလင်းတဲ့ရှစ်ပူးတွေ ဘွဲ့တံဆိပ်တွေမျိုးစုံနဲ့တင့်တယ်နေတဲ့—–တွေ ဖွဖို့ဆွဖို့ကျင့်ကြံနေတဲ့ပြည်တွင်း မိဒိယာတွေ အားလုံးအာလုံး ပြိုင်တူနှာစေးဆွံအ သွားကြလေပြီလားဗျာ။
သဘောထားထပ်တူညီလို့ဆိတ်ဆိတ်နေပြတာလား **မတရားမူ့တခုကို တွေ့လို့သိလို့မြင်လို့ ငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆိုပြီးဆိတ်ဆိတ်နေတဲ့ သူသည်လည်း မတရားမူ့ကျုးလွန်သူနဲ့အလိုတူအလိုပါ ပါဘဲလို့ ဟစ်ကြွေးခဲ့တဲ့ နိဘယ်များဆုရှင်ရော….?
ဟဲဟဲ ၇၈၆ ဆိုင်ကဝယ်ရင်ဒဏ်ရိုက်မယ် ဟုတ်လား …,?လုပ်လုပ် ဒီလိုသာ ကြပ်ကြပ်လုပ် ဒီခေတ်လူငယ်တွေက ကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့လို ခပ်တုန်းတုန်းတွေ မဟုတ်ကြတော့ဘူး။ကမ္ဘာ့ရွာကြီးထဲက သားပျို သမီးပျိုတွေ။ငါတို့သာသနာကဒီလိုမျိုးပါလားဆိုပြီး မေးခွန်းတွေ တက်လာရင် မဆူနဲ့မဟောက်နဲ့ မဟန့်တားနဲ့ ဖြေစရာ စကားကြိုစဉ်းစားထား။
Posted: 23 Jan 2013 07:50 AM PST
Kajian pertama dibuat pada 2010 manakala kedua dan ketiga pada 2012 -SH
Posted: 23 Jan 2013 03:37 AM PST
Not sure what to believe when it comes to the health of your dog? Well, look no further! Time to muzzle those myths!
Posted: 23 Jan 2013 02:14 AM PST
When I started this blog back in 2004, I wasn't really sure if I would stay here for the rest of my life. It just didn't feel like home. Sure, I'd been here for less than two years, but I was still adjusting. Being blessed with an understanding wife andaloving family here did help. But I didn't really have many friends of my own. I didn't feel like I belonged here.
Blogging madeadifference. Through blogging, I became part ofacommunity. This was back in the days of Project Petaling Street, when I was writing posts and publishing them and pinging PPS, and people were reading my posts and leaving comments, and I was doing the same at other blogs. I got to knowafew like-minded people who I began to consider friends, even though I would only meet some of them in person once or twice (in fact, there are some I've only met in the last year or two, after knowing them online for so many years). Whenever I went to the Immigration Department to get another pass, the government made it quite clear to me that I was justavisitor. But that loose community of bloggers acknowledged me as one of their own — at least some did — which I appreciated even if the gestures were small. Little things can makeabig difference. I was even included inaproject called 50 Posts to Independence, which saw bloggers offering up various perspectives on Malaysia as it approached 50 years of independence in 2007 (my contribution was number 40 and shows I was still in the early stages of wrestling with what it means to be an immigrant in Malaysia). Being allowed to contribute, to be part of that online community of communities, madeadifference to me. It helped me feelalittle more at home.
Through the people I met online, I was able to get into writing professionally. I began to move in other circles. It wasn't just about blogging anymore. Then Facebook and Twitter came along and became popular, and became the settings for many conversations that had once been found mostly in the blogosphere. I was (and still am) active on both platforms and kept making friends and taking part in those conversations. With each passing day I felt more at home in this country. I don't recall waking up one morning and thinking Hey, Malaysia feels like home now, but that's how I was beginning to feel, slowly but surely. Not just part of an online community, orafew online communities, but part of the community, period. It wasn't just because of online interactions — I think I was just more comfortable with Malaysia generally, with the language, the culture, the food, maybe even the weather, maybe even (gasp) the way people drive here — but those online interactions really helped.
At the end of last year, someone nominated me to be 'curator' of Malaysia's Twitter account foraweek, and I was asked by the admins to give itago. Well, it's not an official account or anything (unlike Sweden's Twitter account, this one wasn't set up by the government, just by some people who felt Malaysia should haveaTwitter account). But it's become Malaysia's voice on Twitter nonetheless, with Malaysians of various backgrounds taking turns at the microphone. I wasn't sure if I wanted to take that on — how would people react toaforeigner representing the rakyat? — but I finally decided to go for it. Besides, Sharon Bakar was the curator the week before me, and she survived. So on New Year's Eve I took over the account and spentaweek chatting about Malaysia with Malaysians, and with people elsewhere. On my Twitter profile my name shows up as Jordan MacVay, but for that week I was rakyat / Jordan (my dictionary defines rakyat as "people; citizen; subject").
It turned out to beagreat experience. I'm sure there were some people who weren't thrilled that I was the face of Malaysia foraweek, and I had less-than-thrilling moments as well thanks to endless questions and wisecracks about How I Met Your Mother, South Park, and Justin Bieber. But it wasagood week. I managed to coveralot of topics, including the immigrant experience (mostly from the perspective ofa'white' immigrant anyway, but also generally), travel, language, culture, and even testicular cancer awareness. I also managed to tweet quiteabit in Bahasa Malaysia, the national language, which I also do sometimes at my own account. I think I managed to keep things interesting throughout the week, and was pretty well received by the account's followers. Some people, including friends of mine, attributed that to cultural immaturity and an obsession with 'white' people. But while my skin colour or ethnicity or whatever likely playedapart in the positive reception I got, I like to think I did well both because of and in spite of those things. Maybe people were pleasantly surprised to know there are orang putih who don't live in little expat bubbles, who can speak the language, who know the culture. And there certainly are, though not as many as one might think. And more than anything I like to think I did well because I was me. Some of the friends I've made through blogging, and writing, and Twitter, these aren't people who are immature or overly fascinated by 'white' people. They let me into their lives because I'm me, because they like certain qualities I have, whatever those qualities are. I don't know, but I'm sure it's about more than just something as crude as race. It's about who I am.
Actually, who am I? That week really got me thinking about identity. I'm Canadian by nationality, but there's more to one's identity than just nationality. When I was growing up on Cape Breton Island, if someone asked me to putalabel on myself besides Canadian, I probably would have said Scottish, as most of my ancestors were Scottish and Cape Breton's culture has retained strong Scottish influences. But here's the thing: I wouldn't qualify to curate Scotland's Twitter account, because I'm neither from there nor do I live there. Yet there I was, representing Malaysia, somethingamuch-younger me would probably find pretty wild. The notion of beingaCape Bretoner, oraMaritimer, oraScot, oraGael, oraCelt, or other labels I might use to identify myself in certain contexts, is something I've been thinking aboutalot, especially since my time as curator. I'll definitely be exploring the issue of identity in greater depth in the near future.
For now, though, I feel more than ever that at least one label I'm beginning to feel comfortable using to identify myself, besides Canadian and 'citizen of the world', is…Malaysian. Yeah, that is pretty wild. I didn't need that week as curator of Malaysia's Twitter account to make me feel like I am indeed part of the rakyat, but it certainly added to this feeling I've been having that this place I live now really is home, that it's becomingapart of me. I'm Canadian by nationality, andafew other things by ancestry and ethnicity or whatever. And I'malittle more Malaysian with each passing day.
Erna Mahyuni blogs at ernamahyuni.com when she's not subbing for TMI. A slave to Bioware, Bethesda and her mini-zoo of two cats andarabbit.
We are all 'pendatang,' Dr M
JAN 23 ― Sometimes, I think the nation would be better served if Tun Dr Mahathir Mohamad's vocal chords tookatrip to Siberia.
After all, few things have been as powerful and as destructive as his voice.
With that voice, he suggested Operasi Lalang. With his words, he brought low two institutions: the royalty and the judiciary.
But to silence him forever is to play by the rules he set. Kill dissent, smother criticism, strangle freedom of expression.
We may not like to listen to Dr Mahathir, but we have to give him the same rights we long for and deserve.
As he enters his twilight years he continues digging his own grave, this time by insisting we scrutinise the citizenships granted to the non-Malays during Malaya's independence.
That he equates Sabah's illegal immigrants with the Chinese and Indians is insulting. But hardly surprising.
Dr Mahathir believes that to elevate the Malays, it is necessary to trample on the other races. In his heart, Malaysia has always been "Malay-sia." Land of the Malays, for the Malays, by the Malays.
And it isalie perpetuated by the fools in Perkasa and the more right-wing elements in Umno.
This country would be nothing without the "pendatang." Dr Mahathir also forgets that many so-called Malays have ancestors who were also in their days "pendatang." The Bugis. The Minang. The Javanese.
Go to Kelantan and you will see Malays who have Thai ancestry. Go to Johor and you will find Malays who can name Chinese among their forebears.
USM professor Zilfalil Alwi, wroteapaper "Asal Usul Melayu Berdasarkan Fakta Genetik" (Tracing the Origins of the Malays by Analysing Genetic Data) where he theorised that early Malays could also have been Indian priests who had arrived at the Malay peninsula to propagate the Hindu faith.
That would make sense, seeing the predominantly Hindu Malay population in Bali. Who eat pork unreservedly, to the horror of our Malays when they visit the island.
Dr Mahathir says "Melayu mudah lupa" but himself forgets that non-Malays have worked for the country, fought for the country, died for the country. If tomorrow, should all the non-Malays leave en masse, the country would be crippled.
Non-Malays have served in government, in the armed forces, as well as in the police. Can Sabah's illegal immigrants say the same? Can we say that Sabah's "instant citizens" fought off the communists or, in the Confrontation, say they fought off Indonesia's armed push to put an end to Malaysia?
Unlike Sabah's illegal immigrants, the Chinese and Indians did not come from countries who still privately believe that Sabah and Sarawak should belong to them.
If one day Sabah's illegal immigrant population dwarfs the natives, would it be surprising if either Indonesia or the Philippines attempts to again "claim" the Borneo states as many of its citizens are there anyway?
While Sabah's illegal immigrants have contributed to the economy, the natives do not embrace them as kin. They cannot claimashared history, they cannot pretend to have become part of the process that led to Malaysia's birth.
They did not win the right to citizenship. They do not deserve to be citizens merely because they are willing to vote for Barisan Nasional.
Dr Mahathir also forgets the Orang Asli, who, among all the peoples of Malaysia, most deserve to be called "sons of the soil". But they have benefited the least and suffered the most from Malaysia's creation. We take their land, send missionaries to "save their souls" when we can't even save them from poverty.
To the Orang Asli, we are perhaps the real pendatang who have taken everything and given them little in return.
They are barely even recognised in our history books or schools. How many Malaysians, for instance, can name the many Orang Asli tribes? Instead of recognising the Sakai and Jakun as the "real" bumiputera, "sakai" and "jakun" are now Malay derogatory terms.
Posted: 23 Jan 2013 03:45 AM PST
Solidariti Anak Muda Malaysia (SAMM), Selangor hari ini menggesa seluruh rakyat Selangor hadir ke perhimpunan menolak Syarikat Bekalan Air Selangor (Syabas) sebagai syarikat mengurus air di negeri ini.
"Rakyat Selangor terpaksa melanggan perkhidmatan Syabas yang tidak mempunyai kepakaran dalam pengurusan bekalan air hingga menyebabkan rakyat mendapat perkhidmatan yang tidak memuaskan.
"(Dan) kini mengalami gangguan bekalan air ditambah dengan kadar tarif yang tidak munasabah dan amat membebankan," menurut Azhar dalam satu kenyataan.
Posted: 22 Jan 2013 11:35 PM PST
I would like to emphasize more on insulting Islam at grass root level.
These insults and instigation usually and regularly occur on the buses in the market and everywhere at public places.
Clandestine booklets and papers with HATE SPEECHES published are the first stage of ISLAMOPHOBIA and so called monks organized in various regions of Myanmar. Oat Ta Ma and Wira Thu and may be some others are synchronizing it.So. these kinds of things have happened not randomly. These are the plots of the top notches in the Military and government, central/union government and regional governments.
We need to publicize their activities and inform to UN and other Islamic organizations, officially. It is also needed to send official complaint to the Government.
Muslims of Myanmar need to set up and runaseparate department and collect the records and works.
There should be the press release at least quarterly inayear.
There should be world wide discussions to counter these threats in any mean.
Posted: 22 Jan 2013 10:34 PM PST
အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ကာကွယ်ခြင်းလော.နာဇီ ဖက်ဆစ်စနစ် ထူထောင်ခြင်းလော။ (အပိုင်း-၂) ဇန်နဝါရီ ၂၂ ၊၂၀၁၃ ဆောင်းပါးရှင်- ဦးဦးမှော်ဆရာ
၁၉၃၀ ၀န်းကျင်လောက်မှာ ဂျာမနီမှာ ဂျူးလူမျိုးဦးရေ ၆ သိန်းကျော်ရှိပြီး၊ ဒါဟာ တနိုင်ငံလုံးလူဦးရေရဲ့ ၁% သာ ရှိပါတယ်။ ဂျာမန်ဂျူးတွေဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဂျာမနီနိုင်ငံသားဖြစ်ရတာကို ဂုဏ်ယူလေ့ရှိပြီး၊ သူတို့လူမျိုးတွေထဲက အလွန် ကျော်ကြားတဲ့ ကဗျာဆရာတွေ၊ စာရေးဆရာတွေ၊ အနုပညာရှင်တွေ မြောက်မြားစွာ ပေါ်ထွန်းခဲ့တာပါ။ ဒါတင်မကသေးဘူး။ ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးမှာ ဂျာမန်ဂျူး ၁ သိန်းကျော်ဟာ ဂျာမနီစစ်တပ်ထဲ ၀င်ရောက် အမှုထမ်းခဲ့ပြီး အဲဒီထဲက မြောက်မြားစွာသော ဂျူးစစ်သားတွေဟာ သူရဲကောင်းဘွဲ့တံဆိပ်တွေ ချီးမြှင့်ခံရတဲ့ အထိ တိုင်းပြည်တာဝန် စွမ်းစွမ်းတမံထမ်းဆောင် ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဂျာမန်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာ အစိုးရဌာနတွေမှာလည်း ၀င်ရောက်အမှုထမ်းနေသလို၊ တက္ကသိုလ်တွေမှာလည်း ဆရာများအဖြစ် အမှုထမ်းနေခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၀၅ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၃၆ ခုနှစ်အတွင်း နိုဘဲလ်ဆုရခဲ့တဲ့ ဂျာမနီနိုင်ငံသား သိပ္ပံပညာရှင်နဲ့ အနုပညာရှင် ၃၈ ဦး ရှိတဲ့ထဲမှာ ဂျာမန်ဂျူး ၁၄ ဦး ပါဝင်တဲ့အထိ ဂျူးတွေဟာ ဂျာမနီနိုင်ငံအတွက် ဂုဏ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။ လူမှုဘ၀နဲ့ စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာ ဂျာမန်ဂျူးတွေအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု တချို့တလေ ရှိပေမဲ့လည်း သူတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့အနာဂတ်ကို ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပဲ မြှုတ်နှံထားဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားကြပါတယ်။ (ဒါကပဲကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ်တူးမိသလား မပြောတတ်ဘူး) သူတို့ဟာ ဂျာမန်စကား ကိုသာပြောပြီး ဂျာမနီကို ကိုယ့်အိမ်လိုပဲ သဘောထားခဲ့ကြပါတယ်။
၁၉၃၃ ဇန်န၀ါရီလ ၃၀ ရက်နေ့ နာဇီပါတီအာဏာရလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ နာဇီပါတီခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဂျာမန်ဂျူးတွေ ကို အလုံးစုံဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ဖို့ ကျိတ်ပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအစီစဉ်အရ လူထုတွေပါ လက်ခံပါဝင်လာအောင်လုပ်ရမဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာ အရေးအကြီးဆုံးအဖြစ် မီဒီယာကိုသုံးပြီး ၀ါဒမှိုင်း တိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ထိလွယ်ရှလွယ်ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို စီကာပတ်ကုံး ရေးသားလှုံ့ဆော်ထားတဲ့ ဂျူးမုန်းတီးရေးစာတွေ လှိုင်လှိုင်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၊
လူကြီးရော ကလေးတွေပါ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် နာဇီဝါဒမှိုင်းတိုက်မှုအောက် ကျရောက်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံ့သမိုင်းတလျောက် ဂျာမန်များ နဲ့ ဂျူးများ တသားတည်းနေခဲ့ကြပေမဲ့လည်း ဖက်ဆစ်နာဇီပါတီရဲ့ ဂျူးမုန်းတီးရေး ၀ါဒမှိုင်းတိုက်ခဲ့မှုကြောင့် သူစိမ်းပြင်ပြင် ဖြစ်သွားခဲ့ကြတယ်။ (ဒီအကြောင်းကို ကျနော့်ဆောင်းပါး အပိုင်း-၁ မှာ ဖေါ်ပြ ခဲ့ပြီးပါပြီ။)
(ခုလို ဘုရားဟောခဲ့သယောင်ယောင် ခပ်တည်တည်နဲ့ ရွှီးခဲ့တာကိုလည်း အဲဒီအချိန်က ဂျာမန်ပညာတတ်များမျောပါခဲ့ကြပါတယ်။)
(ဂျူးတွေကို ခုလိုလူမျိုးရေးအရသာမက ဘာသာရေးအရပါ စက်ဆုပ်မုန်းတီးစိတ်ဝင်သွားအောင် လုပ်ကြံရေးသားခဲ့ပါတယ်။)
၁၉၃၃ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှာတော့ နာဇီပါတီဝင်တွေဟာ ဂျူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်းမှု လုပ်ငန်းတွေကို တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ဆန့်ကျင်သပိတ်မှောက်ဖို့ စတင်ဆော်သြ ခဲ့ပါတော့တယ်။ ဒီသပိတ်မှောက်မှုဟာ ဂျာမန်-ဂျူး အဓိကရုန်းတွေဖြစ်ပွားစေပြီးဖို့ ရည်ရွယ် လုပ်ဆောင်တာ ဖြစ်ပြီး၊ ဂျူးမုန်းတီးရေး လှုံ့ဆော်စာတွေကိုလည်း ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဂျာမန်-ဂျူး အဖွဲ့အစည်းကြီးက တရားဥပဒေအရ အကာကွယ်ယူနိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့၊ ဂျူးလူမျိုး နှိပ်ကွပ်ရေးဟာ အစိုးရကိုယ်တိုင်ရဲ့ မူဝါဒဖြစ်နေတဲ့အတွက် လျစ်လျူရှုခံခဲ့ရပါတယ်။ (ကျနော်တို့ဆီမှာ `သမ္မတကြီးဆီသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ´ မျိုးထင်ပါ့)။
နောက်ပြီး ၁၉၃၃ မေလမှာ `ဂျာမနီ အစိုးရ၀န်ထမ်းများ ပြင်ဆင်ခန့်အပ်တဲ့ ဥပဒေတစ်ရပ် ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီး ဂျူးလူမျိုး ၀န်ထမ်းတွေကို အကြောင်းပြချက်မရှိ အလုပ်တွေက ထုတ်ပယ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီဥပဒေအရ မိမိရဲ့ အဘိုးအဘွားထဲမှာ ဂျူးတစ်ယောက်ပါခဲ့ရင်တောင် ဂျူးလူမျိုးအဖြစ် သတ်မှတ်တာပါ။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု လုပ်ငန်းတွေအားလုံး တစတစရပ်တန့်သွားပါပြီ။ ဂျူးလူမျိုး ၀န်ထမ်းများ အသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင်များ၊ ဆရာ ဆရာမများကို အလုပ်မှ အကြောင်းမဲ့ထုတ်ပယ် ကြပါပြီ။ ဒါဟာ "သွေးဖြင့်`နိုင်ငံသား´ သတ်မှတ်မှု" ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်က ရလဒ်တခုပေါ့ဗျာ။
(ဒါကတော့ မြင့်မြတ်သော ဂျာမန်သွေးကို ကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ဂျူးသွေးပါသူတွေကို ၀န်ထမ်းအဖြစ် ကနေ ရပ်စဲဖို့အတွက် ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုပေါ့.. )
ဂျာမန်မျိုးချစ်များဆိုသူတွေနဲ့ နာဇီပါတီဝင်တွေဟာ ဂျူးလူမျိုးပိုင် ဆိုင်ခန်းတွေ၊ စတိုးဆိုင်တွေ၊ ဆေးခန်းတွေ၊ ရှေ့နေ ရုံးခန်းတွေရှေ့မှာရပ်ပြီး `ဂျူးတွေဆီက ဘာမှမ၀ယ်ရ´၊ `ဂျူးလူမျိုးတွေဟာ ဂျာမနီကို ကြမ္မာဆိုးတွေ သယ်ဆောင်လာတဲ့ သူတွေ´ ဆိုတဲ့ စာတမ်းတွေကိုင်ဆောင်ပြီး စောင့်ကြပ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ဂျူးလူမျိုး ဆိုင်တွေ၊ ရုံးခန်းတွေ၊ အိမ်တွေအားလုံးကို `ဒေးဗစ်ရဲ့ ကြယ်´လို့ခေါ်တဲ့ ဂျူးအမှတ်တံဆိပ်ကို လိုက်လံရေးဆွဲပြီး ကွဲကွဲပြားပြား သိသာထင်ရှားအောင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့တဖြေးဖြေး နိုင်ငံတ၀ှမ်းလုံး အမျိုးသားရေး ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ဂျူးလူမျိုးများကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ဂျူးပိုင်အိမ်တွေ၊ ဆိုင်ခန်းတွေကို တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ဂျူးလူမျိုးများနဲ့ ဆက်ဆံနေဆဲ ဂျာမန်များကို သစ္စာဖေါက်များအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အပြစ်ပေးခြင်းတွေ လုပ်လာပေမဲ့ တရားဥပဒေရဲ့ အကာကွယ်ပေးမှုကို ဂျူးတွေမရခဲ့ပါဘူး။
ဒီကြားထဲ နာဇီပါတီအာဘော် သတင်းစာတွေက `ပြည်သူ့တိုက်ပွဲ´ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကြီးတပ်ပြီး ဗြောင်ကျကျ မီးလောင်ရာ ဓါတ်ဆီလောင်းပေးပါတော့တယ်။ "ပြည်ပမှ ဂျူးအဖျက်သမားများရဲ့ လုပ်ရပ်ဆိုးများကို ကာကွယ်ခြင်း" လို့ နားထောင်ကောင်းအောင် သုံးထားပါသေးတယ်။ "လူထုအစည်းဝေးကြီးမှ ဂျူးလူမျိုးများကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း ကြေငြာချက်" ၊ "ဂျူးလူမျိုးများကို ဆန့်ကျင်ကြ" ၊ "တိုက်ပွဲကို ရှောင်လွဲလို့ မရနိုင်တော့ပါ" .. စသဖြင့် လူမျိုးရေး လှုံ့ဆော်စေတဲ့ ခေါင်းစည်းတွေနဲ့ ပြောင်ပြောင် တင်းတင်း ထုတ်ဝေလာပါတယ်။ ဒါ့ပြင် နိုင်ငံတကာက စာနယ်ဇင်းတွေမှာ ဂျာမန်ဂျူးတွေ ဖိနှပ်ခံနေရတဲ့အကြောင်း ဖေါ်ပြနေကြလို့ ဂျာမနီနိုင်ငံတော် ကြီးကို သိက္ခာကျအောင် ရေးသားမှုများအတွက် လက်တုန့်ပြန် ကလှည့်စားချေရမယ်လို့လည်း ၀ါဒဖြန့်ပါသေး တယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ရာမှာ လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုအပြင် ဘာသာရေးအရ မုန်းတီးဆန့်ကျင်စေရန် လည်း ၀ါဒဖြန့်ခဲ့တာပါ။
ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ ဂျူးဆန့်ကျင်ရေး စတင်စဉ်က သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ဂျာမနီမှာရှိတဲ့ ဂျူးလူမျိုးစီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ ပြိုလဲသွားဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်သာရှိသေးတာပါ။ အစပိုင်းမှာတော့ တပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ဂျူးဆန့်ကျင်ရေး လုပ်ဆောင်ဖို့ ဒေသဆိုင်ရာနာဇီပါတီတစ်ခုက ဦးဆောင်လှုံ့ဆော်မှုသက်သက်နဲ့ လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ ဂျာမန်ပြည်သူ အများစုက ပုံမှန်အတိုင်းပဲ ဂျူးဆိုင်တွေမှာဝယ်မြဲ၊ ဂျူးတွေနဲ့ဆက်ဆံဆဲ ဖြစ်နေပါသေးတယ်။ နောက်ပိုင်း အစိုးရ ကိုယ်တိုင် အတိအလင်းပါဝင်လာတော့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ပိုမိုကြောက်စရာကောင်းလာပြီး၊ ဂျူးလူမျိုးတွေ အားကိုးရာမဲ့ ဘ၀ရောက်အောင်၊ အဘက်ဘက်က အသက်ရှင်ရပ်တည်ရန် ခက်ခဲလာပြီး နေရပ်စွန့်ခွာသွားအောင်၊ အဆုံးစွန်ထိ ဖေါ်ပြရရင်တော့ ဂျာမနီနိုင်ငံမှာရော ကမ္ဘာပေါ်ကပါ ဂျူးလူမျိုးများ လုံးဝပပျောက်သွားစေရန်ထိ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ထားလာ ပါတော့တယ်။ ပုံမှန်ဦးနှောက်ရှိသူအတွက်ဆိုရင် ဒီလိုတွေဖတ်ရတော့ `ဂျာမန်တွေ ရူးနေလား´ လို့ တွေးပြီး ရယ်စရာကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ သေချာတွေးကြည့်တဲ့အခါ နာဇီဝါဒဖြန့်ချိမှုရဲ့ ထိရောက်ပြီး ကြောက်စရာ ကောင်းပုံကို သတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ တမြေတည်းနေ တရေတည်းသောက်၊ ဒိုးတူဘောင်ဖက်နေလာ သူတွေ အချင်းချင်းကြားမှာ လူမျိုးမတူလို့ ၊ ဘာသာမတူလို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ အထိလုပ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေဖြစ်လာအောင် အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ ကျနော်ပြောချင်တာက ဒီလုပ်ရပ်တွေဟာ ရူးသွပ်နေသူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေသာ ဖြစ်သလို၊ ဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ အောင်မြင်မဲ့လုပ်ရပ်တွေလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ မကြာခင် အရှက်တကွဲ ကျရှုံးသွားရမှာပါ။ သို့ပေမဲ့လည်း `ခွေးလှေးခုန်လို့ ဖုန်မထပါဘူးကွာ´ဆိုပြီး ဂရုမစိုက်ဘဲ နေ နေလို့ မရပါဘူး။ သမိုင်းကြောင်းမှာ ငါတို့ ဘယ်လို သွေးစည်းစွာ ရပ်တည်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ရှင်ပြုတုန်းက ရွှေထီးဆောင်းခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို စားမြှုံ့ပြန်ရင်း ငါတို့ကိုတော့ မလုပ်လောက်ပါဘူး လို့ စိတ်ချနေလို့ မရပါ။ အရူးတသိုက်ရဲ့ လုပ်ရပ်ဆိုးက ကျန်တဲ့ ပြည်သူတွေအပေါ် အနည်းနဲ့အများ သက်ရောက်မှုရှိမှာပါ။ ကျန်တဲ့ ပြည်သူတွေက ကိုယ့်အပေါ် အမြင်မစောင်းစေရန် တတ်နိုင်သမျှ ရှင်းပြနိုင်ရပါမယ်။ အရေးယူသည်ဖြစ်စေ၊ အရေးမယူသည်ဖြစ်စေ အစိုးရဆီကို အကြောင်းကြားပါ။ နောက်ပြီး တကမ္ဘာလုံးကြားအောင် တတ်နိုင်သမျှ အသံကျယ်ကျယ်အော်ပါ။ ပြည်တွင်းက ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေး ကြိုးပမ်း လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကို ပံ့ပိုးကြရပါမယ်။ တစ်ခုသတိထားရမှာက ဒီနေရာမှာ ဒေါသ အလျောက် မတုန့်ပြန်သင့်ပါ။ သူတို့ဒီလိုလုပ်လို့ ကိုယ့်ဘက်က ဘယ်လိုတုန့်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး တတ်နိုင်သမျှ ဖျောက်ရပါမယ်။ ဆိုးသွမ်းတဲ့လုပ်ရပ်တွေဟာ လုပ်ဆောင်နေသူတစ်စုနဲ့သာ သက်ဆိုင်ပြီး လူအားလုံးကို ကိုယ်စားမပြုဘူးဆိုတာ အမြဲသတိချပ်သင့်ပါကြောင်း …
(ကျနော့်ရဲ့ ပထမဆောင်းပါးမှာ အလွန်ရှည်သွားတဲ့အတွက် ဖြုတ်လိုက်ရတဲ့ အပိုင်းကို ပြန်တင်လိုက်တာပါ။ ပုံတွေ စုံစုံလင်လင်ကြည့်လိုပါက ကျနော့် FB WALL ပေါ်မှာ Album တစ်ခုလုပ်ထားပါတယ်။ မြန်မာပြည်က လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုတွေကိုပါ တခါတည်း တင်ပေးထားပါတယ်။ ဒီလင့်မှာသွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
>>> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.442217339182799.102180.100001836114921&type=1 )
ဆောင်းပါး (အပိုင်း-၁) ကိုပြန်ဖတ်လိုပါက ဒီနေရာမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
My job is full of heartaches and no wonder I am blue,
It's terrible the awful things that I'm supposed to do.
And if it wasn't for the fact that I'mavirtuous miss,
I wouldn't have the nerve to even finish this.
I had no way of knowing the way the shopmen talk,
But nowadozen timesaday my modesty is shocked.
The fellows crowd around me likealot of crazy fools,
Until they have me dizzy handing out their gosh darn tools.
I don't mind the decent tools, like wrenches, drills and shears,
But what some fellows ask for makes me red behind the ears.
The man repairing bearings comes and asks to see my balls,
And then he laughs and stares at me until the next man calls.
They ask for cocks to fit on pipes, for counter bores and tits,
And when they ask me forascrew, it scares me into fits,
They come and ask for reamers to enlarge their small holes,
They're driving me plumb crazy; darn their rotten souls.
They ask me foraratchet bit and for bastard files.
They always make dirty cracks as through the screen they smile.
They ask me forafemale gauge, and it'sasad, sad, tale,
Because I can't tell the damn things fromamale.
One fellow finds his tool too short, another is too long,
The next one says his tool is weak, another one's too strong.
One fellow asked me for waste to wipeaplumber's cock,
And when I nearly fainted, all he did was gawk.
A foreman looking 'round one day for tools to cutaslot,
Said "Open up your drawers, girl, and show me what you got."
Another came up to me as I returned from lunch,
And asked me withagrin, if I had seen his big prick punch.
And speaking of embarrassment, never shall I forget,
The day the payman asked, "Have youamonthly yet?"
Now how the hell was I to know he meant my monthly check;
By the time they saved him, I'd darned near broke his neck.
I hate to beaquitter, folks will say I lack the guts,
But if I stay another, day this place will drive me nuts.
I really want to do my bit, and that's no doggon bull
But you can have this tool room job; I've got my belly full.
Recently, Robert Epstein reported HERE thatagraying world will have more of the experience that comes with age. It will also be slower, fuzzier, more forgetful, and justabit hard of hearing.
Asagraduate student at Harvard University, I worked with one of the most influential behavioral scientists of all time, B. F. Skinner. Beginning in the summer of 1977, we worked together nearly every day for more than four years, designing experiments and chatting about literature, philosophy, and the latest research. Although we were 50 years apart in age, we were also friends. We saw Star Wars together, had lunch frequently in Harvard Square, and swam in his backyard pool each summer. "Fred" (from Burrhus Frederic) Skinner was the happiest, most creative, most productive person I have ever known. He was also, needless to say, quite smart.
Recently, Gina Kirkish,astudent at the University of California, San Diego, and I analyzed tapes of three comparable samples of Skinner's speech: that 1962 debate,a1977 debate, andaspeech he gave from notes shortly before he died in 1990 at age 86. We found that the speech rate dropped significantly over time, from 148 words per minute in the first sample to 137 in the second to 106 in the third—an overall decrease of more than 28 percent.
Skinner's memory and analytical skills were also declining during the years when I knew him. Sometimes he had no recollection ofaconversation we had had only days before. When I tried to talk with him about technical papers he had published early in his career, he often didn't seem to understand what he had written. And he had no patience for anything mathematical, even his own equations. On the other hand, Skinner was still much smarter than most of the people I knew my own age. When you fall fromahigh enough cliff, you remain far above ground foravery long time.
The sad truth is that even normal aging hasadevastating effect on our ability to learn and remember, on the speed with which we process information, and on our ability to reason. Recent studies suggest that the total loss in brain volume due to atrophy—a wasting away of tissue caused by cell degeneration—between our teen years and old age is 15 percent or more, which means that by the time we're in our seventies, our brains have shrunk to the size they were when we were between2and3years old. Unfortunately, most of the loss is in gray matter, the critically important part of the brain composed of neurons, the cells that transmit the signals that keep us breathing and thinking.
Contrary to what scientists long believed, only about 10 percent of our neurons die during adulthood. The real loss is in the network of connections—the "dendritic trees" that allowasingle neuron to be connected toathousand others. Over the years, 25 percent or more of this network disappears. According to William Jagust,aneuroscientist at the University of California, Berkeley, adults are also losing dopamine,acritical neurotransmitter (the type of chemical involved in transmitting signals between neurons), at the rate of5to 8 percent per decade. "By age 80," Jagust says, "you've lost 40 percent or so of dopamine function. When you think about it, it's remarkable that old people can do so well."
Posted: 23 Jan 2013 12:49 AM PST
မြန်မာမင်းများ၏ လူမျိုးစုံ အမှုထမ်းများနှင့် တာဝန်ခွဲဝေခန့်ထားမှုများ ဇန်နဝါရီ ၂၂ ၊ ၂၀၁၃
တိုင်းပြည်တစ်ပြည်တည်ထောင်ရာတွင် မတူကွဲပြားသောလူမျိုးစုံ အယူဝါဒကွဲပြားသူများကို စုရုံးကာ တည်ထောင်ခဲ့ကြရသည်။ စုရုံးမှုသည် အား တစ်ခုဟု မှတ်ယူသင့်ပေသည်။ စုရုံးမှုမှ စည်းလုံးညီညွတ်မှု ကို ရှရှိနိုင်ပေသည်။ ပြိုကွဲခြင်းများသည် စည်းလုံးညီညွတ်မှုပျက်သုဉ်းသောအခါ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ အနော်ရထာမင်းကြီးသည် အစုစုပြိုကွဲနေသော ပြည်နယ်များ လူမျိုးများကို စုရုံးကာ ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကို အောင်မြင်စွာ တည်ထောင်နိုင်ခဲ့သည်။ စုစည်းမှု၏ တန်ဖိုးကို ကောင်းမွန်စွာအသုံးချတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ဆက်ခံရာ မင်းဆက်များ၏ သမိုင်းကို ပြန်လည်လေ့လာသော် သမိုင်းလှခဲ့သည့် မင်းများ၏ ဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်များသည် အလွန်မှတ်သားဖွယ် အတုယူဖွယ်များ တွေ့ရသည်။ မြန်မာမင်းများ၏ အမှုတော်ထမ်းရွက်ရန် မင်းမှုထမ်းများ ခန့်ထားမှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး မင်းတုန်းမင်းတရားကြီး၏ လူမျိုးပေါင်းစုံ တာဝန်ခွဲဝေခံထားမှုကို ဦးဖေမောင်တင် (မဟာဝိဇ္ဇာ) ရေးသားပြုစုတဲ့ မြန်မာမင်း လက်ထက်တော် စာတမ်းများ စာမျက်နှာ (၃၃) တွင်အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားသည်။ ဤကဲ့သို့ သမိုင်းအထောက်အထားများ၊ မှတ်တမ်းများ များစွာရှိနေပါသည်။ သို့သော် ဒီသမိုင်းအထောက်အထားကိုတော့ လူသိနည်းသေးသည်ဟု ယူဆသည့် အတွက် ပြန်လည်တူးဖော်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပုဏ္ဏားအမှုထမ်းများလည်း ပုဂံခေတ်မှစ၍ တွေ့ရှိလာရာ မင်းတုန်းမင်းလက်ထက်တော်၌ ခတ္တိယ၊ ဗြဟ္မဏ၊ သုဒ္ဓ၊ ဗိသျှ၊ ပုဏ္ဏားဖြူ ၁၀ဝ၊ ပုဏ္ဏားညို ၁၀ဝ၊ ဘိသိက်တော်ပုဏ္ဏား ၃၀ဝ၊ ရေကြည်တော်ခပ် ၁၀ဝ၊ ဂြိုဟ်စာကျွေး နတ်တင် ၁၀ဝ၊ ဇာတာတော်ဆေး ၁၀ဝ၊ ပုရောဟိတ် ၆၀၊ အခါပေး ၁၀ဝ ရှိ၏။
ကသည်းလူမျိုးအမှုထမ်းများမှာ လှေတော်တန်း၊ မြင်းစီးသူရဲတန်း၊ ယက်ကန်းတော်၊ဆတ္တာတော်၊ ခဝါတော်၊ အနှိပ်တော်၊ ရေကြည်တော် ပျော်ရာက အမှုတော်ထမ်းကြရသည်။
မြန်မာမူဆလင်အမျိုးသားများဖြစ်ကြသော ကင်းတားကုလားပျိုတပ် အမှုထမ်းတို့သည်
(၅)လက်မနှိပ်အမြောက် စသော အမြောက်စုအမှုတော်ထမ်း၌ တသင်းတွင် လူ ၁၀ဝ၀ ခန့်အမှုတော် ထမ်းရွက်ကြရသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း မင်းတုန်းမင်းတရားကြီး လက်ထက်တော်၌ ဘာသာရေးလွတ်လပ်မှုရရှိရုံမျှမက မင်းတရားကြီးကိုယ်တော်တိုင် ပလီများ ဆောက်လုပ် လှူဒါန်းခဲ့လေသည်။
မြေထူးကုလားအမှုထမ်းတို့မှာ ကုလားပျိုကင်းတားအမြောက်စစ်သည်တော်တို့ မိမိတို့တတ်စွမ်းရာက အမှုထမ်းကြရသည်။
အက္ကပတ်ကသည်းတို့မှာ မြင်းစီး ဓားခုတ် လှံထိုး စစ်သည်တော်အဖြစ် အမှုထမ်း၏။
သီပေါမင်းလက်ထက်တွင် အက္ကပတ်မြင်းဝန်၊ပင်လယ်မြို့စား မင်းကြီး မဟာမင်းလှမင်းထင်ရာဇာဘွဲ့ခံ ဗိုလ်ချုပ်ဦးချုံ
ကလယ်အမှုထမ်းတို့မှာ ပန်းဘဲအလုပ်၊ ဆင်တော် မြင်းတော်ကကြိုးတန်ဆာလုပ် အမှုထမ်းများ ဝတ်ဆင်ရန် အဝတ်တန်ဆာအချုပ်အလုပ်၊ ကြေးသွန်း၊ ပန်းတဉ်း၊ မိမိတတ်စွမ်းရာကအမှုထမ်းရသည်။
ဝေသာလီအမှုထမ်းတို့မှာ ဖျာရက်၊ ရိုင်ရက်၊ ခြင်းကြားရက်၊ ပဒေသာတန်ဆောင်တန်လုပ်ဝါးနှင့် ဆိုင်ရာ မိမိတတ်ကျွမ်းရာက အမှုထမ်းကြရသည်။
ရှမ်းအမှုထမ်းဖြစ်ကြသော ကောင်းဟန်ရှမ်း၊ ယွန်းရှမ်း၊ ဓနုရှမ်း၊ ကဒူးရှမ်းတို့သည် လက်နက်ကိုင် စစ်သည်ဘက်၌ အမှုထမ်းကြပြီးပလောင်အမှုထမ်းတို့မှာ လက်ဖက်၊ သစ်ကြားသီး၊ သစ်အယ်၊ သစ်တို၊ လိမ္မော်၊ ဗကျာက် ဟူသမျှအလုပ်နှင့်စစ်မှုတွင် ထမ်းဆောင်ကြရသည်။
တရုတ်အမှုထမ်းတို့မှာ မုန့်တော်ဆက်၊ နဂါးတိုး၊ နရားအက၊ လက်သမား၊ ကျောက်သွေး စသောအမှုတော်ကို ထမ်းရသည်။ ကုလားတိမ်အမှုထမ်းတို့မှာ မီးပန်း မီးကျည် မီးနီ မီးဝါ မီးစိမ်း မီးပြာ မီးဖြူ မီးပန်းအလုပ်၊ မျက်လှည့်၊ ကြေးသွန်း၊ ယမ်းချက်၊ ယမ်းထောင်း၊ အမြောက်ဆံလုပ် အမှုတော်ထမ်းကြရသည်။ (ပေါ်တူဂီ စသော တိုင်းတပါးမှ လာရောက်သော လူမျိုးများကို ကုလားတိမ်ဟုဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။)
မရမံအမှုထမ်းများမှာ ဘုရင်ကိုးကွယ်တော်မူသော ဆရာတော် သံဃာတော်များ၏ ကျောင်းဝစ္စပသာကုဋီများကိုသုတ်သင်ရသည်။ ယိုးဒယားအမှုထမ်းတို့မှာ အချက်အပြုတ်အလုပ်၊ ရေကြည်တော်ခပ်၊ ယိုးဒယားရာမဇာတ်ဖြင့် အမှုတော် ထမ်းကြရသည်။ မော်လမြိုင် ဒလဘက်အမှုထမ်းတို့မှာ သင်းဘောသမ္ဘန်လှေတော်လုပ် လက်သမား စသဖြင့် အမှုထမ်းကြရလေသည်။
ဤသို့ဖြင့် မြန်မာမင်းများ၏အုပ်ချုပ်စီမံပုံသည် သဘောထားပြည့်ဝ၍ လွတ်လပ်မှုရှိသည်။
ဆရာဦးဖေမောင်တင်၏ မြန်မာမင်းလက်ထက်တော်များ စာအုပ်တွင် ဤကဲ့သို့ ဖေါ်ပြပါရှိသကဲ့သို့ စာမျက်နှာ (၃၅)တွင် ပေးထားသောမှတ်ချက် ၁-၂ သည်လည်း စိတ်ဝင်စားဖွယ် တွေ့ရပြန်သည်။
(မှတ်ချက် ၁၊ ၂။ ။ဤယံ ကောင်စစ်ဂျင်နရယ်တို့ တည်းခိုသော အခွန်ဝန်မူလာအီဗရာဟင်၏ တိုက်နေရာသည် ယခုမန္တလေးမြို့ ၂၆ ဘီလမ်း၊ အာဇာနီလမ်း ရိုးကုမ္ပဏီတိုက်ပျက်ကြီး၏မြောက်ဖက် ဝင်းကြီးပင်ဖြစ်သည်။ စစ်မဖြစ်မီက မွတ်စလင်အမျိုးသား အထက်တန်းကျောင်းရှိသည်။ ယခုအခါ ကေဘီမော်တော်စတိုး ကားပျက်များထားသည်။ ဈေးချိုတော် မြောက်ဖက်တိုက်တန်းနှင့်ကပ်လျက် စူလတီဗလီ၌ သင်းချိုင်းဂူတခုတွင် မူလာအီဗရာဟင်၏သား မူလာအစ္စမံအလယ်သည် အဖရှိစဉ်ကပင် မင်းတရားကြီးလက်ထက်တော်၌ သူဌေးကြီးတို့အစီးအနင်းအဆောင်အရွက် မဟာဘောဂဓနရာဇာဘွဲ့နှင့်တကွ သူကောင်းပြုတော်မူသည်။ ယင်းနောက် သား မာန်အောင် ရတနာစေတီတော်ဒါယကာသီပေါဘုရင်လက်ထက်တော်တွင် အခွန်ဝန် အကောက်ဝန် လောကဗိမာန် လှေတော်အုပ် ကျောက်ရဲမြို့စား မင်းလှစည်သူ ဘွဲ့အမည် အရည်နှင့် သူကောင်းပြုတော်မူသည်။ နောက် မြန်မာနိုင်ငံတော်ကို အရှင်အင်္ဂလိပ်အစိုးရ မင်းတို့ သိမ်းပိုက်အုပ်စိုးတော်မူရာ လူကြီးလူကောင်းမှန်သည့် အတိုင်း ခန်ဘဟာဒူးဟူသောဘွဲ့ကို ပေးသနားတော်မူ၍ မင်းသုံးဆက်တိုင် ရာထူးဌာနန္တရအမျိုးမျိုး သူကောင်းပြုတော်မူခြင်းကို ခံစံရသောမူလာအစ္စမံအလ်သည် သက္ကရာဇ် ၁၂၀၃ ခု ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း ၁၁ ရက် တနင်္ဂနွေဘွား အသက် ၆၆ နှစ် သက္ကရာဇ်၁၂၆၇ နတ်တော်လဆန်း ၂ ရက် တနင်းလာနေ့ နံနက် ၅ နာရီအချိန် ထွက်ကသွာအေလာဟီရှိသည့်အတိုင်း အသျှင်မြတ်အမိန့်တော်ကို ခံရလေသည်}}စသည်ဖြင့် ကျောက်စာ ရေးထိုးထားလေသည်။)
သီပေါမင်းလက်ထက် ရွေးလက်ျာတပ်မှ ထိုးကွင်းမင်ကြောင်ဘောင်းဘီစွပ်နှင့် တွေ့ရသော တပ်မှူး ဦးရွှေဂုဏ် (အသက် ၇၆နှစ် အရွယ် ၁၃၀၀ပြည့်နှစ်က ရွှေဘိုခရိုင် ဘူးကြီးကျေးရွာတွင် ရိုက်ကူးပါသည်၊)
ရွှေဘို ဦးဘဦး ပြုစုစီရင်ရေးသားသော ရွှေမန်းအနှစ်တရာပြည့် ဗမာမွတ်စလင်တို့၏အထုပ္ပတ္တိ စာအုပ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
ထိုခေတ်ကာလသမိုင်းများ တစ်လျှောက်တွင်ပင် လူမျိုး ဘာသာထက် အရည်အချင်း အရည်အသွေးကို သာကြည့်၍ ဦးစားပေးရွေးချယ် ချီးမြှင့်မြှောက်စားခဲ့ကြကာ အရောင်အသွေးအစုံ ပြည်သူများ၏ ချစ်ကြည်လေးစားမှုကို မြန်မာဘုရင်များ ရရှိခဲ့ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတော်သည် သူ့ကျွန်ဘ၀ရောက်ခဲ့သော်လည်း ကျွန်ဘ၀ရောက်တဲ့ နိုင်ငံအများစုထက် စော၍ လွတ်မြောက်ခဲ့သလို ကျွန်ပြုခံကာလတစ်လျှောက်လုံးတွင်လည်း တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ၏ နည်းမျိုးစုံ တော်လှန်မှုများကို ကာလအစဉ်အဆက် နယ်ချဲ့ များ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။
ယနေ့အချို့ ပြောကြသလို တိုင်းတပါးသား ကျူးကျော်သူများ ဆိုပါက မိမိနိုင်ငံကိုသာ မိမိ အသက်ပေးချစ်ကာ စွန့်လွတ်ကြမည်သာ ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မူရင်းနေထိုင်သူ တိုင်းရင်းသားအားလုံးသည် သမိုင်းကာလတစ်လျှောက်လုံး မြန်မာမင်းများ၏ ပျိုးထောင်ပေးခဲ့သော မိမိတိုင်းပြည် မိမိနယ်မြေကို ချစ်စိတ် တန်ဖိုးထားစိတ်များကြောင့်သာ ယခု လို ဘ၀ပေါင်းများစွာ ပေးဆပ်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သမိုင်းတွင် ပေးဆပ်ပြခဲ့သည် လုပ်ပြခဲ့သည် ဆိုသော စကားများသည် ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်များ ကိုသာမက လူမျိုးအားလုံးကို စော်ကားသော စကားများပင်ဖြစ်သည်။ ပေးဆပ်ရဲသော လုပ်ရဲသောသတ္တိသည် လူတစ်ထောင်တွင် တစ်ယောက် မလုပ်နိုင်သော စိတ်ဓါတ်ဖြစ်သည်။ ပေးဆပ်ခြင်း၏ နောက်ကွယ်တွင် ဘ၀ပေါင်းများစွာ တန်ဖိုးထားမှုများစွာကို ပေးအပ်ခဲ့ရသည်ကို သိသင့်လှပေသည်။
သမိုင်းတွင် စုပေါင်း အား ကြောင့်သာ အောင်မြင်ခဲ့သည်များသာ ရှိပါသည်။ လူမျိူးတစ်မျိုးတည်း၏ တီထွင်မှုများကြောင့် ကမ္ဘာကြီး တိုးတက်မလာသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်သလို ကူးလူးဆက်ဆံ ဖလှယ်ခြင်းကြောင့်သာ တိုးတက်လာခြင်းဖြစ်ပေသည်။
မြန်မာ့နိုင်ငံ၏ တိုးတက်မှုဏ္ဍစုံကို ပြန်လည်လေ့လာပါက နယ်ပယ်စုံတွင် ထူးချွန်ပြောင်မြောက်သူများသည် လူမျိုးစုံ အယူဝါဒစုံသူများ သာ ဖြစ်သည်။ စနစ်ဆိုးများ၏ အောက်တွင် ဘ၀သက်တမ်းတစ်ခုစာမျှ နေထိုင်ခဲ့ရသော မျိုးဆက်များသည် ဆိုးမွေများကို အများအပြား ရရှိခဲ့ကြပေသည်။
ဘက်နှစ်ဖက်ကိုကြည့်တတ်သော စိတ်ဓါတ်များ ပျက်သုဉ်းကာ တစ်ဖက်ဆွဲ စိတ်ဓါတ်များ ရင့်သန်လာခဲ့ကြသည်။ စနစ်၏ သားကောင်များ ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်ခဲ့ကြရသည်။
တိုင်းပြည်တွင်းရှိ လူမျိုးပေါင်းစုံ စည်လုံးညီညွတ်ခြင်းကို ဘယ်တော့အခါမျှ မည်သည့်အာဏာရှင်များ မနှစ်မြို့ နိုင်ပေ။ ထိုင်ခုံများတည်မြဲရေးအတွက် မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒသည် အာဏာရှင်များ၏အသုံးချ နည်းဗျူဟာများထဲမှ သည်းခြေအကြိုက်တစ်ခု ပေဖြစ်သည်။ နေရာဒေသ နိုင်ငံကွာခြားသော်လည်း အာဏာရှင်ကြီးများ အနည်းနဲ့ အများ ကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်ကို သမိုင်းတွင် လေ့လာနိုင်ပေသည်။
ရွှေထီးဆောင်းခဲ့သည်များကို အရိုးဆွေးသည့်အထိ ပြန်လွမ်းနေခြင်း မဟုတ်သလို ဘာကြောင့် ရွှေထီးဆောင်းခဲ့ကြရသည်၊ ဘာကြောင့်ဇန်လျောခဲ့ကြသည် များကိုတော့ ပြန်လည် သုံးသပ်သင့်ပါက လေ့လာသင့်ပေသည်။ ကာလအပိုင်းအခြားကြောင့် ခေတ်ပြောင်းခဲ့ပင်မဲ့ အချို့ သမိုင်းများသည် တစ်ပတ်လည် လာသည်။ ထိုအခါ သမိုင်းထဲက အမှားများကို ပြန်လည်သုံးသပ်မှုမရှိကာ သမိုင်းဟောင်းများထဲက အမှားများအတိုင်း ပြန်လည်မကျူးလွန်ဖို့ကိုတော့ သတိပြုသင့်လှပေသည်။
Posted: 22 Jan 2013 08:17 PM PST
အကြောင်းအရာ ။ ။ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်၍ အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသောသူများကို တည်ဆဲဥပဒေများအရ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူပေးရန် ပန်ကြားတင်ပြခြင်း။
လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှ စတင်၍ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် အချို့ဒေသများတွင် အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေး၊ မုစ်လင်မ်ဆန့်ကျင်ရေး စာရွက်စာတမ်း၊ လက်ကမ်းကြေညာ စာရွက်များ ထုတ်ဝေဖြန့်ချိနေခဲ့ကြခြင်း၊ ဥပဒေဆန်ဆန် အမိန့်ကြေညာစာများ ထုတ်ပြန်နေခဲ့ ကြခြင်း၊ အချို့မီဒီယာများဌာနများမှ မသုံးနှုန်းထိုက်သည့် အသုံးအနှုန်းများကို သုံးနှုန်းနေခြင်းနှင့် မခိုင်လုံသော သတင်းများကို ထည့် သွင်းဖော်ပြနေကြခြင်း၊ တရားဓမ္မပွဲများ၌ မိမိသက်ဝင်ယုံကြည်ရာ ဘာသာတရားနှင့် အလျဉ်း မသက်ဆိုင်သည့် အစ္စလာမ့်ဆန့်ကျင်ရေး၊ မုစ်လင်မ်ဆန့်ကျင်ရေးစကားများကို တရားသဏ္ဍာန်ဖြင့် ဟောပြော ပို့ချနေခြင်းတို့ကို ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် လေ့ လာ တွေ့ရှိရပေသည်။ ထိုသို့ အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေးများ ဆောင်ရွက်နေခြင်းသည် သက်ဝင်ယုံကြည်မှု ဘာသာတရား ကွဲပြား ခြား နားသော ပြည်သူများအကြား အမုန်းတရားများကို ဖြစ်ထွန်းလာစေ၍ တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက် မုန်းတီးခြင်း၊ ရန်မူခြင်း၊ စိတ်ဝမ်းကွဲခြင်း များ ပေါ်ပေါ်လာရန် အကြောင်းတရားများကို ဖန်တီးနေကြပေသည်။ ထိုကဲ့သို့သော လုပ်ရပ်များသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ၏ အောက်ဖော်ပြပါ ဥပဒေနှင့်လည်း ဆန့်ကျင်နေပေသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ပုဒ်မကြီး၊ ၃၆၄ တွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ "ထို့ပြင် လူမျိုးရေးကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဘာသာရေးကြောင့်သော်လည်းကောင်း တစ်ဖက် နှင့်တစ်ဖက်၊ တစ်ဂိုဏ်းနှင့်တစ်ဂိုဏ်း မုန်းတီးခြင်း၊ ရန်မူခြင်း၊ စိတ်ဝမ်းကွဲခြင်း တစ်မျိုး မျိုး ပေါ်ပေါက်လာစေရန် ရည်ရွယ်သော သို့မဟုတ် ပေါ်ပေါက်လာရန်အကြောင်းရှိသော အပြုအမူသည် ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သည်။ ထိုအပြုအမူမျိုးအတွက် ပြစ်ဒဏ်ပေးနိုင်ရန် ဥပဒေ ပြဌာန်းနိုင်သည်။"
သို့သော် အထက်ဖော်ပြပါ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များကို ချိုးဖောက်၍ ထိုသို့သောလုပ်ရပ်များကို ဆောင် ရွက်နေသောသူများအား အောက်ခြေရှိ အုပ်ချုပ်သူ အာဏာပိုင်များအနေနှင့် ထိရောက်စွာ အရေးယူခြင်းမပြုပဲ မသိကျိုး ကျွန်ပြု ၍ နေကြပေသည်။ သို့ပါ၍ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ ယင်းပြဌာန်းချက်နှင့် အခြားတည်ဆဲဥပဒေများကို ချိုးဖောက်နေ ကြသော သူများအားလုံးကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိရောက်စွာ အရေးယူပေးပါရန် ကျွန်ုပ်တို့ အစည်းအရုံးမှ သမ္မတကြီးအား တိုက် ရိုက် လေးလေးနက်နက် တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။ ထို့ပြင် ယခုကဲ့သို့ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူများ၏အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်၊ ဂုဏ်သိက္ခာများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးစေမည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအကြား ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း ဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်၍ အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာ့မုစ်လင်မ်လူထုကြီး တစ်ရပ်လုံးမှ ပြင်းထန်စွာ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ အစည်းအရုံးမှ လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက်တွင် တစ်ကြိမ်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၂၂) ရက်နေ့တွင် တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် မြန်မာနိုင်ငံသား ဗုဒ္ဓဘာသာသာဝင်များနှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအကြား ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း ဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်၍ အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေခြင်း ကို ပြင်းထန်စွာ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြောင်း ကြေညာ ချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ထိုသို့ ကန့်ကွက်ခဲ့သော်လည်း အစိုးရအာဏာပိုင်များမှ မည်သို့မျှ ထိရောက်စွာ အရေးယူပေးခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့၍ ယခု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံသို့ လေးလေးနက်နက် စာရေးသား၍ တောင်းဆိုရခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့ပါ၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်း စိန်နှင့်တကွ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းရှိ အာဏာပိုင် အကြီးအကဲများအနေနှင့် ယင်းကဲ့သို့ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းများ ပေါ်ပေါက်လာအောင် ဖန်တီးနေသည့် ရာဇ၀တ်မှုများကို ကျူးလွန်နေကြသောသူများကို ကျောသားရင်သား မခွဲခြားပဲ ပြင်းထန်စွာ ထိထိရောက်ရောက် တရားဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူပေးပါရန် မြန်မာ့မုစ်လင်မ်လူထုတစ်ရပ်လုံး၏ ကိုယ်စား ကျွန်ုပ်တို့မှ ထပ်မံ၍ လေးလေးနက်နက် တောင်း ဆိုလိုက်သည်။ အကယ်၍ သမ္မတဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အစိုးရအာဏာပိုင်များမှ အထက်ဖော်ပြပါ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း ဖန်တီးနေကြသည့် တရားခံများအား ဥပဒေအရ ထိထိရောက်ရောက်၊ လျှင်လျှင်မြန်မြန် ဖော်ထုတ်၍ အရေးမယူ ခဲ့ခြင်းကြောင့် အနာဂတ်တွင် ရာဇ၀တ်မှုများ၊ အကြမ်းဖက်များ၊ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း၊ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းများအတွက် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ၎င်း၏အစိုးရအာဏာပိုင်တို့၏ တာဝန်သာလျှင်ဖြစ်ကြောင်း လေးစားစွာဖြင့် ရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ပြည်သူပြည်သားများအားလုံး အကြမ်းဖက်မှု ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးမှ ကင်းဝေး၍ ကိုယ်၊ စိတ်၊ ၀ိညာဉ် သုံးပါးစလုံး အေးချမ်းသာယာကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလျှက်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီ
PDF ဖိုင်ဖြင့် ဒေါင်း၍ ဖတ်ချင်သူများအတွက် လင့်ခ်များ
— with Tin Shwe and4others.
Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak memberi jaminan Barisan Nasional (BN) akan menyelesaikan masalah air yang kritikal di Kelantan jika ia menawan kembali negeri ini pada Pilihan Raya Umum ke-13 (PRU13).
Beliau berkata, perkara itu tidak sepatutnya berlaku di Kelantan hingga membebankan rakyat yang selama ini memberi mandat kepada Pas untuk memerintah sejak 1990.
"Tidak usah bercakap soal lain, kalau masalah air pun tidak boleh diselesaikan. Saya beri jaminan dalam tempoh terdekat ini boleh diselesaikan oleh kerajaan BN. -petikan BERNAMA
Demikian temberangnya Najib konon nak selesaikan masalah air di Kelantan. Sedangkan masalah air di negerinya sendiri, Pahang, tak selesai pun. Jom tonton:
Posted: 22 Jan 2013 06:27 PM PST